दु’खद खबर : घर जग्गा बेचेर (MBBS) डाक्टरी पढेका : जोगिन्दरको कोरोनाले लियो ज्या’न” – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठबिश्व/प्रवासदु’खद खबर : घर जग्गा बेचेर (MBBS) डाक्टरी पढेका : जोगिन्दरको कोरोनाले लियो ज्या’न”
दु’खद खबर : घर जग्गा बेचेर (MBBS) डाक्टरी पढेका : जोगिन्दरको कोरोनाले लियो ज्या’न”
Sudur Samaj | Wednesday July 29, 2020	Comments
एजेन्सी – छोराको जन्म भएपछि चौधरी परिवारको एउटै सपना थियो, ठूलो भएपछि डाक्टर बनाउने। गाउँलेहरूले सुझाव दिए–यदि छोरालाई भविष्यमा डाक्टर बनाउनु छ भने अग्रेंजी भाषामा पढाई हुने स्कुलमा भर्ना गर्नु। परिवारले ऋण काढेर छोरालाई एमबीबीएस पढाउन चीन पठायो। तर,भविष्य कसलाई थाहा हुन्छ। चौधरी परिवार २७ वर्ष पुरानो आफ्नो सपना पुरा भएपछि छोराको बिहेका लागि केटी खोज्ने अभियानमा जुटेका थिए।
तर, भारतमा बढ्दो कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परिवारले आफ्नो डाक्टर छोरालाई नै गुमाउनु प¥यो। अहिले परिवारमा दुःखको माहोल छ। डाक्टर जोगिन्दर चौधरीले २७ वर्षको उमेरमै ज्यान गुमाएका छन्। बुवा राजेन्द्र चौधरीको आँशु रोकिएको छैन। जोगिन्दरको दिल्लीस्थित डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पतालमा एक वर्षअघि जागिर लागेको थियो। पहिले उनी ‘फ्लू क्लिनिक’ मा कार्यरत थिए।
गत नोभेम्बरमा उनलाई ‘क्याजुल्टी डिपार्टमेन्ट’ मा सारिएको थियो। २३ जुनमा उनलाई ज्वरो आउन सुरु गरेको थियो। सँगै काम गर्ने दुई साथी कोरोनाको पोजिटिभ देखिएपछि उनको पनि तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण भएको थियो ।२७ जुनमा उनलाई थाहा भयो, आफूलाई पनि कोरोना भएको छ भनेर। यसपछि उनलाई अम्बेडकर अस्पतालबाट सारिएर लोक नायक जयप्रकाश अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। यहाँ उनको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गयो।
लगत्तै उनलाई ७ जुलाईमा सर गंगाराम अस्पतालमा सारियो। यहाँ पनि उनको स्वास्थ्यमा खासै सुधार भएन ।पहिले ब्लड प्रेसर कम हुँदै गयो। यसपछि इम्फेसियाको समस्या देखियो। स्वाँस लिन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा २७ जुलाईमा एक महिना लामो लडाईमा उनी पराजित भए। उनलाई कोरोना हुनुअघि परिवार बिहेका लागि केटी खोजिरहेका थिए। जोगिन्दर मध्य प्रदेशको निमच जिल्लाको सिङ्गोली क्षेत्रमा रहेको झान्तला गाउँको बासिन्दा हुन्।
खेती किसानीमा आधारित उनको परिवारमा बुवा–आमा बाहेक जोगिन्दरका भाई र बहिनी थिए। जोगिन्दरलाई एमबीबीएसको अध्ययनका लागि चीन पठाउने क्रममा बुवाले १८ लाख रुपैयाँमा घर बेचेका थिए। जुन पैसाले जोगिन्दरले एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए ।परिवारका सबै सदस्य अहिले पनि भाडाको घरमा बसोबास गर्छन। बुवा राजेन्द्र भन्छन्, ‘मैले सानो छोरालाई राम्रोसँग पढाउन पाइन्। किनभने मेरो हैसियत नै पुगेन। मेरो सपना पुरा गर्न जेठो छोराका लागि पैसाको जोहो गर्नुपर्यो। उसले पनि डाक्टर बनेर मेरो सपना पुरा गरिदियो।
उसले एमडी गरेर गाउँको पनि सेवा गर्छ र पैसा पनि कमाउँछ भन्ने लागेको थियो। उसले यो ठाउँमा अस्पताल खोलेर यहाँका मानिसलाई उपचारका लागि यताउता भड्किनु नपर्ने वातावरण बनाउँछ भन्ने थियो।’बुवा राजेन्द्रले छोराको अध्ययनका लागि लिएको ऋणमध्ये ७ लाख अझै तिर्न बाँकी रहेको बताए। जोगिन्दरका भाई कपिलले आफ्नो दाजु गाउँको पहिलो डाक्टर भएको बताए। ‘उनी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका थिए। तर, कतिबेला आफैलाई संक्रमण भयो, थाहा नै भएन। लकडाउन नभएको भए उनको बिहे गत मार्चमा हुन्थ्यो,’ भाईले भने।
उनले दाजुको स्वास्थ्य लाभको लागि घरपरिवार र गाउँलेले पुजापाढ पनि गरेको बताए। गंगाराम अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको बिल ४ लाख रुपैयाँ भएको थियो। तर, अस्पतालले परिवारको अवस्था हेरेर पैसा नलिने निर्णय गर्यो। गत आइतबार दिल्लीमै उनको अन्तिम दाहासंस्कार गरियो। बुवा आफ्नो जवान छोराको शरीरमा दागबत्ति दिने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका थिएनन्, त्यसैले दाजुको अन्तिम संस्कार भाईले गरे। दैनिक भास्कर
प्रकाश सुवेदीविरुद्ध पूजाको उजुरी
विष्णु पौडेल सेल्फ आइसोलेसन
कक्षा ११ को परीक्षा तत्काल नलिन परीक्षा बोर्डको निर्देशन
साम्राज्ञीले गरिन् नयाँ फिल्ममा सम्झौता
भारतले भन्यो – भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा कुनै शंका छैन !
कोरोना खो’पबारे आयो यस्तो खुसिको खबर, अब यति सस्तोमै पाउने छ्न नेपाली ले कोरोना खोप(मूल्य विवरण सहित)
सारै दु’खद खबर : कोरोना का’रण बिदेशमा १ सय ९१ जना नेपालीको मृ’त्यु”
भारतको चेन्नैबाट २ छोरी छो’डेर महिला फरार”
खुसिको खबर : विश्वभर आज एकैदिन १ लाख ९७ हजारभन्दा बढी संक्रमीत कोरोना जितेर घर फर्किए
दुवईबाट आइरहेको १९१ जना सवार एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमान दु’र्घटना”
साउन महिनाको अन्तिम सोमबार आज यी काम गर्नाले बन्नेछ जिन्दगी सुखमय August 10, 2020
नेताहरु पटक पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने, कुलमान घिसिङ दोश्रो कार्यकाल किन नहुने ? सेयर गरौ !! August 9, 2020
बे’सा’हारा तीन बालक: बुवाको मृ’त्युपछि आमा पोइल टाप: यी बालबालिको भविश्व अन्धकार! August 9, 2020
हो’टलको कोठामा म’ दि रा पि’ ए’र, ल:ठ युवा युवतीको यस्तो भि’डियो बाहिरियो” August 9, 2020
मुकुन्द घिमिरेले भेटाए यति राम्री प्रेमिका, मंसिरमा बिहे गर्दै ! (हेर्नुस भिडियो) August 9, 2020